Blaogim-Piarahamonina GV 06 Janoary 2021
Manambara ny fiarahana miombona antoka ara-botoaty miaraka amin'ny KIRRT
Mediam-bahoaka 01 Septambra 2019
Manambara ny fiarahany miombona antoka amin'ny tetikasa Kirrt izay manangona ireo mpanao asa tanana sy mpanakanto avy ao amin'ny faritra Punjab any India ny Global Voices mba hanolorana sy hampiroboroboana ny asan'izy ireo.
Matoky ny Global Voices fa manan-jo hahazo vaovao betsaka araka izay azo atao ao amin'ny loharanom-baovaontsika ny mpamaky antsika. Araka ny voalazan'ny fehezan-dalànan'ny famoahan-dahatsorantsika.
Inona no anarana tokony homentsika ny Podcast Newsroom GV?
Maso an'arivony manerantany no mamaky ny Global Voices isan'andro. Ahoana raha hanana sofina an'arivony mihaino ihany koa?
Mediam-bahoaka 06 Jolay 2019